ICC Archives - Page2of2-
Home Tag Archives: ICC (page 2)
ပီရူးနိုင်ငံမှ Mr. Gustavo Meza Cuadra Velasquez ဦးဆောင်သော ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များက တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကို ဧပြီလ ၃၀ရက်နေ့ နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် တွေ့ဆုံ၍ “ရိုဟင်ဂျာများသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ်ကြောင်း စစ်တပ်၏အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် အသက်လုထွက်ပြေးခဲ့ရသော ဒုက္ခသည်များကို ဂုဏ်သိက္ခရှိရှိ ပြန်လည်လက်ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း လူမျိုးသုတ်သင်ရေး ကျူးလွန်သူများကို ICC ထံ လွှဲပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း” ပြောကြားခဲ့သည်။ မြန်မာ့စစ်အာဏာရှင်များက နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ပြည်သူကို ၁၉၆၀ခုနှစ်မှစ၍ယနေ့အထိ လိမ်လည်လှည်းစားနေကြသည်။ ၁၉၅၀ ဝန်းကျင်မှစ၍ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြား National Registration Card (NRC ) ထုတ်ပေးခဲ့သော်လည်း NRC ကို နိုင်ငံသားကဒ်အဖြစ် အသိအမှတ်မပြုခဲ့ပေ။ ၁၉၈၉ မှစ၍ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်များ ထုတ်ပေးသည်။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ် ကိုင်ဆောင်သူများသည် စိစစ်ခံအဆင့်သာ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံသားများမဟုတ်ပေ။ …
Comments Off on ရိုဟင်ဂျာ သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားအဖြစ် အဦးဆုံး တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုခံရသူများ
ရခိုင်ကော်မရှင်တွင် ပါဝင်ခဲ့သူ ဒေါက်တာရင်ရင်နွယ်က “ဘင်္ဂါလီပြသနာ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့ post တင်သည်ကို တွေ့သောအခါ ဘွဲ့ရအသိတရားမဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအစွန်းရောက်များ ရှိနေသရွေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ် ကျင့်သုံးလိုသူ နည်းပါးလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင့် တွေးမိသည်။ သူမ၏ post ကို “ဘင်္ဂါလီပြသနာကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းရန် နိုင်ငံတော်မှ တာဝန်ပေးထားသည့် ပညာရှင်အချို့ နှင့် သံအမတ်/ဝန်ကြီး အချို့တိုိ့ အား ထောက်ပြလိုပါသည်။”ဟု အစပြုထားသည်။ သူမ သိထားသင့်သည်မှာ ယခုအချိန်တွင် အစိုးရဖြေရှင်းရမည့် ပြသနာမှာ ဘင်္ဂါလီပြသနာ မဟုတ်။ ရိုဟင်ဂျာပြသနာသာဖြစ်ကြောင်းပင်။ နိုင်ငံတကာက ဂျီနိုဆိုဒ်တရားခံများကို ICC တင်ရန် ပြင်ဆင်နေသည်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြိုသိ၍ မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင်များကို ကယ်တင်နိုင်ရန် “ကိုဖီအာနန် ဦးဆောင်သည့် ကော်မရှင်”အားငှားရမ်းပြီး အကြံပြုစေ၏။ ရဝန်ဒါမှာ ဂျီနိုဆိုဒ် ဖြစ်ခဲ့သည်ကို ကိုဖီအာနန်၏ …
Myanmar Government has arranged 15 Rohingya informers including U Shwe Hla of Aung Mingalar, Sittwe to deceive UNSC delegation before they arrive Myanmar. Informers or brokers in local usage are government lobbies against Rohingya. Myanmar promised international community for safe return of Rohingyas. At the same time, State media spreads propaganda against Rohingya calling them illegal Bengali from Bangladesh. According …
Comments Off on Myanmar is ready to deceive UNSC delegation with 15 informers
ဂျီနိုဆိုဒ်တရားခံများအနက် ထိပ်ဆုံးအဆင့်ကို နေရာယူထားသူ မင်းအောင်လှိုင်က တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်​ ၉ ခုမှ စစ်တိုင်းမှူးများကို နေရာအပြောင်းအလဲပြုလုပ်လျင် ICC အမှုမှ လွှတ်မြောက်သွားမည်ဟု အိပ်မက်မက်နေ၏။ ဗိုလ်ချုပ် မျိုးမိုးအောင် ဗိုလ်ချုပ် မြတ်ကျော် ​ဗိုလ်ချုပ် ခင်လှိုင် ​ဗိုလ်ချုပ် ​တေဇကျော် ​ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဇော်အေး ဗိုလ်ချုပ် ၀င်းမင်းထွန်း ဗိုလ်ချုပ် ညီညီဆွေ ဗိုလ်ချုပ် မျိုးဝင်း ဗိုလ်ချုပ် လင်းအောင် စသော ဗိုလ်ချုပ်များကို စားကျက်သစ်များဖန်တီးပေးပြီး မုဒိန်းတပ်မတော်အတွင်း အပြောင်းအလဲ လုပ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာအနှံ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဂျီနိုဆိုဒ်တရားခံများကို ICC ခုံရုံးအရောက် အမြန်ဆုံးပို့ပေးရမည်ဟု တောင်းဆိုလာသောအခါ ဂျီနိုဆိုဒ်တရားခံများ၏ ဘုရားနှစ်ဆူဖြစ်သော ရုရှားနှင့်တရုတ်တို့သည်ပင် အဆိုပါတရားခံများကို ကယ်တင်နိုင်ရန် မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့နေကြသည်။ ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦး နှင့် ဒုရဲမှူး မိုးရန်နိုင်တို့၏အမှု ကချင်ပြည်နယ်တွင် လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေသော လူမျိုးတုံးသုတ်သင်မှု စစ်တွေမြို့မှ တပ်မ …